Tag: suuq geyn sanadle ah | Martech Zone
Tag: suuq geyn sanadle ah
3 Tilmaamood oo lagu cadeeyo Jahwareerka Suuqgeynta Millennials-ka
Jimco, Juun 3, 2016 Jimco, Juun 3, 2016 Dan Morrow
Waa maxay dhab ahaan kun-sano-jir? Taasi waa su’aal guud oo adduunka oo dhan la iska waydiiyo. Dadka qaar, tirakoobkani waa mid aan dhiirrigelin, caajis iyo saadaalin la'aan. Odyssey ahaan, waxaan u aragnaa inay yihiin kuwo dhiirrigelin badan, selfaware iyo wax la saadaalin karo. Jiilalka qaarkood ayaa had iyo jeer lagu soo rogay fikradaha khaaska ah iyo dadaallada lagu doonayo in fiiro gaar ah loo yeesho ayaa laga yaabaa inay saldhig ka ahaato. Jiilka kun-jireed ma aha mid ka duwan, waxaanan halkan u joognaa inaan kuu sheegno in millennialsyadu aysan ahayn hal cabbir oo dhan. Shakhsiyeynta ayaa ah